Artificial Intelligence (AI) Uye Iyo Revolution YeDhijitari Kushambadzira | Martech Zone
Dhijitari kushambadzira ndiyo musimboti weese ecommerce bhizinesi. Iyo inoshandiswa kuunza mukutengesa, kuwedzera ruzivo rwe brand, uye kusvika kune vatengi vatsva.
Nekudaro, musika wanhasi uzere, uye ecommerce mabhizinesi anofanirwa kushanda nesimba kuti akunde makwikwi. Kwete izvozvo chete-ivo vanofanirwa zvakare kuteedzera eazvino tekinoroji maitiro uye kushandisa mashambadziro ekushambadza zvinoenderana.
Imwe yazvino hunyanzvi hwekugadzira iyo inogona kugadzirisa kushambadzira kwedhijitari iri chakagadzirwa njere (AI). Ngatione kuti sei.
Nyaya Dzakakosha Ine Mazuva Ano Ekushambadzira Channel
Panguva ino, kushambadzira kwedhijitari kunoratidzika kunge kuri nyore. Ecommerce mabhizinesi anogona kuhaya mushambadzi kana kugadzira timu inozotarisira masocial network, inobata yakabhadharwa kushambadzira, kuhaya vanokurudzira, nekubata nekumwe kukwidziridzwa. Zvakadaro, akati wandei nyaya dzakakomba dziri kusimuka kuti ecommerce zvitoro zviri kunetsekana nazvo.
Mabhizinesi Anoshaya Mutengi-Centric Nzira - Kuva unotarisana nevatengi kunofanirwa kuve chinangwa chebhizinesi rega rega. Zvakadaro, varidzi vazhinji vebhizinesi vanopfuura nepfungwa iyi uye vanoramba vakaisa pfungwa pavari, ivo ROI, uye zvigadzirwa zvavo. Nekuda kweizvozvo, kuitiswa kwevatengi kunoramba kuchinyatsojeka, uye makambani anowanzo sarudza kuzotarisana nazvo gare gare. Nehurombo, uku kukanganisa kukuru. Munyika yanhasi, vatengi vanoziva kukodzera kwazvakaita uye havadi kubatwa semabhangi eenguruve. Pasina mutengi-centric nzira, mabhizinesi anopotsa pakugadzira yakavimbika yevatengi base uye nekuwana makwikwi pamakwikwi pamusoro pevakwikwidzi.
Kune Matambudziko neBig Data - Varidzi vezvitoro veEcommerce vanoziva kukosha kwekuunganidza dhata pamusoro pevatengi maererano nezve zvinobudirira kushambadzira. Kuunganidza data revatengi kunovandudza ruzivo rwevatengi uye zvinofanirwa, nekudaro, kuwedzera mari. Nehurombo, mabhizinesi anowanzo sangana nematambudziko makuru e data analytics. Izvi zvinoita kuti varasikirwe neruzivo rwakakosha runogona kuvabatsira kubata hunhu kushambadzira.
Mumashoko eAmerican chipangamazano uye munyori Geoffrey Moore:
Pasina hombe dhata, makambani mapofu uye matsi, achidzungaira kuenda pawebhu senge nondo munzira huru.
Geoffrey Moore, Kushambadzira uye Kutengesa Zvinogumbura Zvigadzirwa kune Mainstream Vatengi
Zvemukati Zvekugadzira Nyaya Ndezvechokwadi - Icho chokwadi chinosara chekuti hapana kushambadzira kwedhijitari pasina zvemukati. Zvemukati zvakakosha pakuvandudza chiziviso cherudzi, kusimudzira masosi, uye kugadzira kufarira. Zvemukati zvinonyanya kushandiswa mukushambadzira kwedhijitari zvinosanganisira mablog mablog, zvinyorwa, zvemagariro, tweets, mavhidhiyo, mharidzo, uye maebook. Zvakadaro, dzimwe nguva mabhizinesi haazive kuti ndezvipi zvirimo zvinogona kuunza mabhenefiti. Ivo vanonetsekana nekuongorora zvinangwa zvevateereri kune izvo zvavanogovana uye vanogona kuyedza kuzvifukidza zvese munzira imwechete pane kusara vakatarisa pane zvinonyanya kushanda.
Adhiiwa Ads Haasi Anogara Akatwasuka - Vamwe varidzi vezvitoro zveecommerce vanowanzotenda kuti sezvo vatove nechitoro, vanhu vanouya, asi kazhinji kuburikidza neshambadziro dzakabhadharwa. Naizvozvo, vanofunga kuti kushambadzira kwakabhadharwa inzira yakachengeteka yekukwezva vatengi nekukurumidza. Nekudaro, vatengesi vanofanirwa kugara vachifunga nezvenzira nyowani dzekukwiridzira kushambadza kana vachida kuita izvi zvinobudirira. Chimwe chiitiko chekutarisa peji rekumhara. Kune akanakisa ekutengesa mhedzisiro, mapeji ekumhara anofanirwa kuve akaumbwa zvakaringana uye shanda pane ese madhizaini. Zvakadaro, mabhizinesi mazhinji anosarudza kushandisa yavo saga peji rekumhara, asi iyo haisi iyo nguva dzose mhinduro yakanakisa.
Varombo Email Optimization - Imwe yedzakanakisa nzira dzekusimudzira zvigadzirwa zvinosanganisira kushambadzira neemail. Nayo, ecommerce mabhizinesi anogona kunanga zvakananga kumutengi uye kuve neakanyanya kutendeuka mitengo. Maemail anovandudza hukama nehutungamiriri uye anogona kushandiswa mune ramangwana, aripo, uye apfuura vatengi.
Nehurombo, iyo yepakati kuvhura mwero wemaemail dzimwe nguva yakanyanya kuderera. Zvakawanda zvekuti avhareji yekutengesa yekuvhura mwero ingori chete nezve 13%. Izvo zvinoenda pakutsvaga-kuburikidza nemitengo. Ivhareji email CTR kune ese maindasitiri ndeye 2.65%, iyo inokanganisa zvakanyanya kutengesa.
KutangaBonsai, Email Kushambadzira Statistics
Maitiro Akanakisa Ine AI Solutions - Neraki, tekinoroji yanhasi inogona kushandiswa mukushambadzira kwedigital kugadzirisa zvese zvataurwa pamusoro. AI uye kudzidza kwemuchina kunogona kushandiswa munzira dzinoverengeka dzekuvandudza kuita kwemunhu, kugadzirisa, uye kugadzira zvemukati. Heano maitiro.
AI yekuita zvirinani kuita kwako - Iwo mabhizimusi eecommerce anoteedzera mafambiro azvino anoziva kuti AI inogona kushandiswa kugadzirisa hunhu nekukurumidza kana mutengi achigara pane peji. Havasi vese vashandisi vakaenzana, uye neAI, zvigadzirwa zvinogona kuita zvinotevera:
Ratidza zvemukati zvemukati pamidziyo
Ipa chigadzirwa kana sevhisi inoenderana nenzvimbo
Ipa zvinokurudzirwa zvichibva pakutsvaga kwapfuura uye mazwi akakosha
Chinja webhusaiti zvemukati zvichibva pane mushanyi
Shandisa AI yekuongorora kwemanzwiro
Muenzaniso wakanakisa weecommerce personalization ndeye Amazon Nongedzera, iyo inobvumira vanogadzira kuti vagadzire maapplication vachishandisa tekinoroji yekudzidza muchina senge Amazon.
Zvishandiso zvine Simba zveBig Data Kuongorora - Kuti igadzire mutengi-centric zano, mabhizinesi anofanirwa kushanda pakuunganidza, kuongorora, uye kusefa ruzivo rwakakodzera rwevatengi. NeAI, kuunganidzwa kwedata uye kuongororwa kunogona kuve kwakatwasuka. Semuenzaniso, iyo chaiyo AI chishandiso inogona kuona kuti ndeapi mhando ezvigadzirwa anotengwa zvakanyanya, ndeapi mapeji anoonekwa zvakanyanya, uye akafanana. AI inogona kuteedzera rwese rwendo rwevatengi uye nekupa mhinduro kwayo yekuvandudza kutengesa. Semuenzaniso, neGoogle Analytics, vatengesi vanogona kuona maitiro evatengi pane webhusaiti.
Pamhepo AI Mapuratifomu eChisiko Chemukati - AI inokwanisa kugadzirisa zvinhu zviviri zvakajairika nezviri mukati - kukurumidza kugadzira zvemukati uye kuongorora vatengi kuita kune izvo zvirimo. Kana zvasvika pakusikwa kwemukati, pane akawanda AI maturusi anowanikwa pamhepo kubatsira vashambadziri kuti vauye nemifananidzo yakashambadzirwa yemagariro, misoro yezvinyorwa, kana kunyangwe kunyora blog blog kana kugadzira vhidhiyo inosimudzira. Kune rimwe divi, AI-powered software inogona kubatsira vashambadziri kuongorora zvinopfuura huwandu hwevanhu chete. Iyo inogona kuongorora maitiro evatengi uye zvemagariro midhiya kubatanidzwa. Vamwe mienzaniso inosanganisira Inotumbuka Social, Cortex, Linkfluence Radarly, zvichingodaro.
AI Inogona Kurerutsa Pamhepo Kukwidziridzwa - Parizvino, Facebook uye mamwe mapuratifomu anopa maturusi eAI kubatsira vashambadzi kubata kushambadza kwavo zviri nyore. Izvi zvinoreva kuti shambadzo hadzizoparadze. Kune rimwe divi, vatengesi vanokwanisa kuwana kumarudzi ese eruzivo ayo anoita kuti kushambadzira kushambadze kuve nyore. Pane rimwe divi, Facebook inoshandisa AI kuendesa izvo kushambadzira chaiko kune chakanangwa nevateereri. Pamusoro pezvo, iyo peji yekumhara inoita basa rakakosha kunze kwekushambadzira. Kugadzira yakanakisa peji yekumhara inogona kuita mutsauko wakakura. AI inogona kubatsira nezvinhu zviviri zvakakosha zveinoshamisa kumhara peji-kuita munhu uye dhizaini.
AI yekushandisa Email - Sezvo kushambadzira kweemail kwakakosha kumabhizimusi epamhepo, AI inogona kugadzirisa mashandisiro emaimeri. Chii chimwe, AI inogona kushandiswa kutumira emhando yepamusoro maemail uye kuwedzera mari paunenge uchidhura. Panguva ino, maturusi eAI-anokwanisa anogona:
Nyora email zvinyorwa zvirevo
Tumira maemail akasarudzika
Vandudza macampaign eemail
Optimize email kutumira nguva
Ronga email zvinyorwa
Uku kugadzirisa kunogona kuwedzera kuvhura uye kubaya-kuburikidza nemitengo uye kunotungamira kune zvimwe kutengesa. Pamusoro pezvo, AI chatbots inogona kushandiswa mukutumira mameseji maapplication, kuzadza email mishandirapamwe, uye kuburitsa iyo yakasarudzika yakasarudzika ruzivo.
Dhijitari kushambadzira chikamu chakakosha chebudiriro yega yega bhizinesi. Zvakadaro, ecommerce zvitoro zvine kwakawanda uye kwakawanda kukwikwidza kurova, uye munzira iyoyo, vatengesi vanogona kusangana nematambudziko akati wandei. Semuenzaniso, kugadzira zvemukati kunogona kunetesa, uye kubata nedhi data hombe kungaratidzika kunge kusingakwanise.
Neraki, nhasi, maturusi mazhinji eAI-anoshandiswa kunze uko anobatsira vashambadziri kukwidziridza nhimbe dzavo uye mabhizinesi anounza mari. Kubva pakagadziridzwa maemail kusvika kushambadziro epamhepo, AI ine simba rekuchinja mashandisiro edhijitari. Chinhu chakanak kwazvo nezvazvo - zvinongova zvishomanana chete kubaya.
kuburitsa: Martech Zone ine Amazon yakabatana link mune ino chinyorwa.
Tags: aiai chatbotsai mienzanisoai mapuratifomuai mhinduroai zvishandisoamazon personalizechakagadzirwa njerebig datakuongorora kukuru kwedatabrand awarenesschat chat botstinya-kuburikidza mitengozvakasikwa zvemukatimutengi-centricdigital advertisingemail ctremail kushambadzira manhambaemail optimizationFacebook aiGeoffrey mooreutsanzionline kukurudziramitero yakazarukaakabhadhara adsPersonalizationppcrankingskutanga
Isaja Karadakovska akapedza kudzidza Pol-Sci, aimbova Junior Researcher, uye parizvino ToraATumble's Zvemukati Murongi. Iye anotyairwa kutsvaga nekugadzira zvirinani zvemukati. Yake yekusununguka nguva yakatsaurirwa kune yake chirimwa obsession.
Iyo Kudzoka pane Investment (ROI) yeKushambadzira Automation Platforms